उपत्यकामा कति बर्षसम्मका बालबालिकालाई काेभिडविरुद्धकाे खोप लगाइदै छ ? - ramechhapkhabar.com
उपत्यकामा कति बर्षसम्मका बालबालिकालाई काेभिडविरुद्धकाे खोप लगाइदै छ ?
काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई आजदेखि काेभिड-१९ भाइरसविरुद्धको खोप लगाइँदैछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडाैं, ललितपुर र भक्तपुरका १२ देखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा खोप लगाइने भएकाे हाे ।
सरकारले आजबाटै लागू हुनेगरी आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालय १५ माघसम्मका लागि बन्द गरिसकेकाे छ । यही अवधिमा १२-१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खाेप लगाउने सरकारी लक्ष्य छ । जसअनुसार पहिलाे चरणमा उपत्यकाका विद्यालयमा खाेप अभियान सुरु हुन लागेकाे हाे ।
बालबालिकालाई फाइजर र मोडर्ना खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। बालबालिकाहरुलाई उमेर खुल्ने कागजात लिई तोकिएका खोप केन्द्रमा गई भीडभाड नगरी स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरी खोप लिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
विश्वविद्यालय खुला, विद्यालय बन्द
मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी मुलुकभरका सम्पूर्ण विद्यालय माघ १५ गतेसम्म बन्द हुने भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमण दर रोक्न सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)को आइतबारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो । केन्द्रले आधारभूत तथा माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म)का पढाइ बन्द गर्न र विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको जारी परीक्षा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले यो अवधिलाई विद्यालय बन्द नभनेर बिदा दिने भनेको छ । यो बिदालाई वार्षिक बिदामा मिलान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।